Kulankii la wada sugayay inuu isniinta dhex maro MOURINHO vs GUARDIOLA oo laga yaabo inuu baaqdo….(Ogoow sababta)+SAWIRRO – Gool FM
Kulankii la wada sugayay inuu isniinta dhex maro MOURINHO vs GUARDIOLA oo laga yaabo inuu baaqdo….(Ogoow sababta)+SAWIRRO
Byare July 21, 2016
(Manchester) 21 Luulyo 2016. Macallimiinta sida wayn u xifaaltama ee horey feeraha isaga soo jabiyay Real Madrid iyo Barcelona iminkana kala hor kaca Man United iyo Man City ee Jose Mourinho iyo Pep Guardiola ayaa laga yaabaa inuu baaqdo kulankii ugu horreeyay ee isku food saari lahaayeen isiinta.
Kulankii ugu horreeyay ee Manchester Derby ee ka dhaca bannaanka Uk ayaa laga yaabaa inuu u baaqdo sababo roobab mahiigaan ah.
Manchester United iyo Manchester City ayaa lagu waday inay ku ciyaaraan magaalada Beijing ee dalka Shiinaha marka ay saacada UK tilmaameyso 1pm maalinta isniinta ee soo socota.
Laakiin roobab mahiigaan ah oo ka socda caasimada Shiinaha ayaa kulankaa shaki wayn galiyay.
Red Devils ayaa durba sii gaartay dalkaasi si ay berito ula ciyaarto kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund, halka Man City iyana lagu wado inay caawa gaarto magaalada Beijing kaddib guul daro 1-0 uu la soo kulmay Guardiola kulankiisii ugu horreeyay uu leliyo kooxda lagu naaneyso Sky Blue.
Sikastaba, kalanka kooxaha ku coltama Manchester ee isniinta ka dhici lahaa Bird Nest Stadium ee qaada 91.000 ayaa la arkaa inuu baaqdo waa haddii ay sii socoto cimilada cakiran.
Labada koox ayaa ku tartamaya koobka International Champions ee ka dhacaya Shiinaha wuxuuna sheegay mid u hadlyay tartankan: “Waa walaac.
“Cimiladu dhab ahaan aad bay u xumaayeen, laakiin waxaan ku rajo waynahay inuu kulanka dhici doono.”.
“Aad baan ugu faraxsanahay inaan ku biiro.” Lukaku oo beri tijaabada caafimaad u maraya Lazio
Chelsea oo 8-gool ku xaaqday Atus Ferlach….(Weeraryahanka cusub ee Blues Michy Batshuayi oo 2-jeer shabaqa tagay)